Midowga Afrika oo ku booriyay dowladda Soomaaliya in la dedejiyo dhameystirka doorashada | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Midowga Afrika oo ku booriyay dowladda Soomaaliya in la dedejiyo dhameystirka doorashada
Midowga Afrika oo ku booriyay dowladda Soomaaliya in la dedejiyo dhameystirka doorashada
written by Admin 15/12/2021
Ururka Midowga Afrika ayaa ugu baaqay dowladda Soomaaliya in la dedejiyo dhameystirka doorashada muddada dheer socotay xilli ay mucaaradku ku hanjabeen inay qaadi doonaan tallaabooyin adag ka dib markii la isku khilaafay hufnaanta hannaanka.
Golaha Nabadda iyo Ammaanka ee Midowga Afrika ayaa war-murtiyeedka ku sheegay inay ku dhiirri-gelinayaan guddiga doorashadda Federalka (FEIT) inay dedejiyaan qabanqaabada dhammaan doorashooyinka la sugayo muddada loo cayimay.
Hadalkan ayaa daba socda shir ay AUPSC yeesheen 7-dii bishan December kaas oo sidoo kale looga hadlay xaaladda amni ee dalka iyo rajada laga qabo in la helo ciidamo cusub oo beddeli doona AMISOM marka uu dhamaado howlgalkooda.
Baaqyada ka soo yeeraya ururka Midowga Afrika ee ku aadan baahida loo qabo in la dhameystiro doorashada ayaa ku soo aadeysa, kadib hanjabaado ka soo yeeray Golaha Murrashaxiinta Madaxweynaha oo ku aadanaa in la dhiso gole KMG ah oo dalka hogaamin doona.
Puntland, Hirshabelle iyo Jubaland ma aysan dooran hal xildhibaan, sidoo kale beelaha Banaadiriga ee Muqdisho ayaa loo qoondeeyay shan kursi. Jubbaland ayaa Talaadadii ku dhawaaqday 14 kursi oo cusub oo lagu tartamayo balse wali ma aysan cayimin waqtiga doorashada
Midowga Afrika oo ku booriyay dowladda Soomaaliya in la dedejiyo dhameystirka doorashada was last modified: December 15th, 2021 by Admin
Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo gaaray magaalada Kismaayo
Dowladda Mareykanka oo baaq u dirtay madaxda maamul goboleedyada dalka
Al-shabaab oo shaaciyay inay madax furasho ka qaateen sii daynta haweeney u dhalatay Italy.
Gudoomiyaha Aqalka Sare oo lagu soo dhaweeyay Dhuusamareeb (SAWIRRO)
Maamulka Jubbaland ”Muqdisho ma’aha xiliggan meel shir lagu qaban karo